QM oo sheegtey in Muqdisho ay ka barakaceen in ka badan 200,000 oo rayad ah. [Akhris …] – Radio Daljir
Sida ay sheegtey laanta u qaabilsan Qaxootiga QM magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka barakacay magaalada Muqdisho tan iyo bishii May 204,000 oo qaxooti ah ku waas oo ka cararey dagaallada ka soconaya magaalada Caasimadda ee Muqdisho.
QM ayaa sheegtey in tiradani ay tahay tii ugu badneyd ee Muqdisha ka barakacdey tan iyo sanadkii 2007 xilligaas oo magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen dagaallo u dhaxeeyey kooxaha mucaaradka iyo ciidamadii Itoobiya ee xilligaas ku sugnaa magaalada Muqdisho.
Ron Redmond oo u hadley UNHCR ayaa ku darey intaas in dagaallada Muqdisho ay isaga soo horjeedaan kooxaha Al Shabaab iyo Xisbul Islaam oo isku dhinac ah iyo dawladda waxaana ay gaareen dagaalladu goobo xasilloona oo in muddo ahba aysan ka hogan wax dagaallo ah.
Dadka ayaa intooda badan waxaa ay u barakaceen degmada Afgooye halkaas oo ay QM ay sheegtey in ay ku sii sugnaayeen rayad gaaraya illaa iyo 400,000 oo qaxooti halkaas oo ay awalba ku dayacnaayeen.
Sidoo kale waxaa ay sheegtey QM in dadka ay gaareen gobollada Gal guduud, Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo Baay halkaas oo dayac xooggan ay ku heysato, waxaana wali jira ayeey tiri QM dad hor leh oo ka sii qaxaya magaalada Muqdisho.
Sidoo kale UNHCR waxaa ay sheegtey inkasta oo ay xirantahay xadduudka waddamada Soomaaliya iyo Kenya haddana waxaa jira wali dad sii galaya xerada qaxootiga eee Dhadhaab halkaas oo ay ku suganyihiin sidoo kale qaxooti aad u tiro badan.
Ma?aysan muujin QM wax rajo ah oo ku aaddan in dagaallada Muqdisho ay qaboobaan, waxaana ay ka digtey dacdarrada ay ku sii sugnaanayaan dadka barakacaya iyo kuwa horey u barokacay.